Donald Trump anaghị tweet ọzọ | Apg29
Donald Trump anaghị tweet ọzọ
Akwụsịla Onye isi ala nke United States na Twitter kpamkpam
Nke a bụ ihe Twitter Twitter kwụsịtụrụ Donald Trump dị ka ugbu a.
Nwa Donald Trump Donald Trump Jr tinyere aka na Twitter iji katọọ mkpebi ahụ imechi nna ya.
Echere m na ihe mere mgbe ndị na- akwado ụda wakporo Capitol na Washington, USA, jọgburu onwe ya, ọ metụtakwara m nke ukwuu.
Ugbu a Twitter emechiela Donald Trump kpamkpam site na ikpo okwu ha.
Facebook, Instagram na Snapchat akpachikwara ndekọ onye isi ala ruo mgbe ebighị ebi.
Na mgbakwunye, Donald Trump nwere akụkọ na mgbasa ozi kwụsịrị na vidiyo vidiyo Twitch na Tiktok.
Ihe kpatara mmechi ahụ
Twitter kọwara na post na blọọgụ ihe mere ha jiri mechie onyeisiala:
Nke a bụ otú o si ekwu na Swedish dị ka nsụgharị Google:
Mgbe anyị nyochachara nlezianya nke tweets ọhụrụ site na akaụntụ @realDonaldTrump na gburugburu gbara ha gburugburu - kpọmkwem etu esi anabata ha ma sụgharịa ha na na Twitter - anyị emechila akaụntụ ahụ kpamkpam n'ihi ihe egwu nke ịmalite ịmalite ime ihe ike.
Nke ahụ kwuru, ihe mere mgbe a wakporo Capitol dị egwu, mana ọ bụ Onye isi ala n'ezie kpọrọ oku maka ime ihe ike?
Nwa Donald Trump Donald Trump Jr. kpọọrọ na Twitter ịkatọ mkpebi imechi nna ya:
"Anyị bi na 1984 nke Orwell
"Ya mere ndị ayatollah na ọtụtụ ndị ọchịchị aka ike ndị ọzọ nwere ike ịnwe akụkọ Twitter n'emeghị ihe ọ bụla n'agbanyeghị na ha na-eyi mba niile egwu na mgbukpọ na igbu ndị na-edina ụdị onwe ha ...
Kpee ekpere maka ọnọdụ dị na United States. Kpee ekpere ka ndị mmadụ na-echigharịkwuru Jizọs na -enweta ya. Ọ bụ naanị ya bụ onye nwere ike ịzọpụta na ịnapụta. Ọzọkwa, e gosipụtara na ụfọdụ ndị isi ndọrọ ndọrọ ọchịchị enweghị ike ịzọpụta ma zọpụta ndị mmadụ.
Onye ikwesiri itukwasi obi
Fọdụ ahụla Donald Trump dịka onye nke Chukwu o gosipụtara n’oge na-adịbeghị anya. Mana ọ bụrụ na anyị atụkwasị ndị mmadụ obi, anyị ga-enwe nnukwu ndakpọ olileanya, dịka m chere na ọtụtụ adịla ugbu a.
Nwoke Chineke gosipụtara n’oge na-adịbeghị anya abụghị Donald Trump, kama ọ bụ Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, bụ Jizọs Kraịst. Ọ bụ onye nke Chineke na ọ bụ Onye Nzọpụta. Ọ bụ Jizọs ka ị kwesiri ịtụkwasị obi, mgbe ahụ ị gaghị enwe mmechuihu.
V 03, tisdag 19 januari 2021 kl 00:04